travelcologne Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: travelcologne
နေအိမ် > travelcologne
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဧပြီလဥရောပခရီးသွားအဆိုပါနွေဦးအချိန်ကာလအတွင်းဥရောပခရီးသွားဆိုလိုတယ်! ဥရောပနိုင်ငံအများစုယခုအချိန်အထိအီကွေတာကနေကတည်းက, နာမည်ကျော်မြို့ကြီးများ၏အများစုကိုဧပြီလတုန်းပဲနည်းနည်းရှိအေးမြသောများမှာ (အညီထုပ်ပိုး). နေဆဲ, Travelပြီလတွင်ဥရောပခရီးသွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်…
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ အဆိုပါ Cologne ပွဲတော်ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းဖြည့်စွက်ရကျိုးနပ်သည်. 1.5 နှစ်စဉ်နီးပါးတက်ရောက်သူသန်းချီ, သဘောတူ! ထို့အပြင်ပဉ္စမ-ရာသီအဖြစ်လူသိများ, ဒီကမ္ဘာကျော်ပွဲတော်တစ်သက်တာတစ်ဦးအတှေ့အကွုံဖြစ်ဖို့သေချာသည်. အဆိုပါ Cologne ပွဲတော်သာပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်လည်း…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သငျသညျမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးလေယာဉ်ပျံထက်ရထားလမ်းခရီးသွားစိတ်လှုပ်ရှား၏ပျော်ရွှင်မှုလက်ခံလို့ရထားလက်လှမ်းမှီဥရောပတိုက်တွင်သောအရပ်တို့ကိုရှာဖွေနေကြသူထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်စိတ်အားထက်သန်ခရီးသွားများအတွက်, ဤနေရာတွင်သင်ကိုချစ်မယ်ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းရဲ့. ဥရောပရထားခရီးစဉ်များနေ့စဉ်စီး…